Etu aga-esi kwado imewe nnabata Email na ebe ị ga-enweta enyemaka! | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 9, 2015 Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Douglas Karr
Ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n’ahụ ma ọtụtụ mmadụ jiri ha smartphone na-agụ email karịa ịme ịkpọ oku ekwentị (fanye sarcasm banyere njikọta ebe a). Chazụta ihe ochie ekwentị ụdị dara site na 17% afọ karịa afọ na 180% ndị ọzọ na-azụ ahịa na-tinye n'ọrụ ha ama ka ịhụchalụ, iyo, na-agụ email karịa ka a afọ ole na ole gara aga.
Otú ọ dị, nsogbu bụ na ngwa email adịghị aga ngwa ngwa dị ka ihe nchọgharị weebụ nwere. Anyị na ndị ahịa weebụ desktọọpụ ka dị ka Outlook nke na-adabere na HTML ochie iji nye email nke ọma. Ndị ahịa email ọhụụ ga-eweta nsụgharị ọhụrụ nke HTML na CSS nke ọma, na-enye ohere ahụmịhe email dị ịtụnanya. Ọ dịghị mfe izipu ozi email ma mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ nhọrọ nke smartphones, mbadamba, weebụ, na ndị ahịa ngwanrọ.
Ọ dị mkpa iji igwe nyocha dị ka Litmus (anyị nwere ya jikọtara na anyị ikpo okwu mgbapụta na 250ok, onye òtù ọlụlụ). Email na-azaghachi bụ ngwakọta nke HTML, CSS, na HTML ọhụrụ. Formathazi na ọbụna usoro nke koodu email gị dị oke mkpa iji bulie ọgụgụ isi gafee nlele anya.
Budata Ndepụta Email Na-anabata Ihe
Ọ bụrụ na gị ESP adịghị enye azịza ndebiri, enwere ihe ole na ole n'ịntanetị iji nweta enyemaka na email na-anabata:
Zurb - ebipụtawo usoro ndebiri email na-anabata mobile.
Email na Acid - na - enye usoro ndebiri email efu iji bulie gị ma na - agba ọsọ ọsọ dịka o kwere mee.
Litmus nwere nhọrọ wuru site Stampụ na ị nwere ike ibudata na PSDs metụtara.
Mailchimp ebipụtala ụfọdụ ndebiri nzaghachi na Github. Na Ozi agbakwunyewo ndozi nke ha.
Na-anabata Email Resources - Nchịkọta nke ngwaọrụ na akụrụngwa maka imewe ozi email.
Okwu nwere onyinye buru ibu nke onyinye a na-akwụ ụgwọ dị egwu tinyere faịlụ Photoshop na ntuziaka.
Ọrụ maka Imewe Email na Inye Ntinye
Ndị ọkụ - ọ bụrụ na ịchọrọ nhazi ọhụụ ma ọ bụ nwee atụmatụ chọrọ koodu, ndị folda na Uplers rụrụ ezigbo ọrụ maka ụfọdụ ndị ahịa anyị!
DK New Media - ọ bụrụ n’inwee nsogbu pụrụ iche nke ịchọrọ enyemaka, egbula oge iru!
Highbridge - Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ahịa Cloud ma ọ bụ Pardot ahịa ma na-achọ iji mejuputa imepụta email ọhụụ, ndebiri, yana ndebiri ozi email, ka anyị mara.
Dị ka ndị na-ere ahịa email, imewe nzaghachi bụ isiokwu na-ekpo ọkụ kemgbe ọtụtụ afọ ka uto a na-enweghị atụ chịkọtara uzuoku. Ugbu a, anyị eruola n'ókè ebe mmebe ozi email, bụ imewe email! N'ime ihe omuma ohuru nke Instiller, anyi chikotara onu ogugu nke na-achota ihe di nkpa iji nye ndi oru aka na nkwukọrịta email gi.
Steve Painter, Onye nhazi
Onye nrụnye bụ onye na-eweta ọrụ Email ahaziri maka ụlọ ọrụ ndị na-enye azịza email zuru oke iji hazie, zipu ma kọọ na email ezitere maka ndị ahịa ha (ha gụnyere ụfọdụ ngwaọrụ nnweta na nlekota aha).
Ndị folks na Litmus etinyela ọmarịcha akwụkwọ ozi a na isiokwu na-eso ya, The How-To Guide to Responsive Email Design .Otu esi Etuziaka.
Tags: 250okihe omumunweta ozi email ụlọ ọrụonye na-ewu emailemail imewendị mọnk emailemail na acidemailportportGitHubihe ndozilitmusmailchimpneteffektozi iku umeemail na-anabataonye na-ewu email na-anabataimewe ozi emailndebiri email na-anabataNwachukwu
Twitter na Video, Dị ka ahụekere butter na jelii